ရန်ကုန်မြို့ထဲက လူသိပ်မသိသေးတဲ့နေရာလေးတစ်ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Steal Deal » ရန်ကုန်မြို့ထဲက လူသိပ်မသိသေးတဲ့နေရာလေးတစ်ခု
Posted by Davit on Apr 27, 2012 in Steal Deal | 35 comments
ဒီအကြောင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး သိတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ သိပ်မသိသေးတဲ့သူတွေ များနေမယ်ထင်လို့ တင်လိုက်တာဗျ…ရွာထဲကသူတော်တော်များများတော့သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အနီးအနားက သူတွေကို လက်တို့လို့ရအောင် ရေးလိုက်တာပါ။
2 သိန်းဖုန်းတွေကိုဝယ်နေကြတာကိုကြည့်ရတာ တော်တော်ကို စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းသဗျ။ ( ဟဲ့ ဒေးဗစ်ရ…သူ့ပိုက်ဆံရှိလို့ သူ့ဟာ့သူဝယ်တာ ဘာဖြစ်သဒုံးလို့တော့ မပြောနဲ့ဗျ…) မတန်တဲ့2သိန်းဖုန်းကို ဝယ်ဖို့ဗျာ…တန်းစီလိုက်ကြရတာ …. တစ်ချို့ဆိုရင် နေပူထဲမှာ ခေါင်းတောင်ကိုက်တယ်တဲ့…. အပူရှိန်ကလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီနေ့ဆိုရင် 41 ဒီဂရီ ဆိုလားဘာလား…ချွေးတဒီးဒီးကျပြီး တန်းစီစောင့်….ပြီးတော့ရောင်းရမဲ့ကဒ်ပြည့်သွားရင်လည်း … တိန်….သေဘီလေ။ အဲ့ဒိဒုက္ခတွေမခံချင်လို့ အပြင်ဆိုင်မှာဝယ်တော့လည်း2သိန်းအပြင် တစ်သောင်းတို့၊ 1 သောင်းခွဲတို့ပိုပေးရ။
(ခုဟာက….အေး …ငါတို့ကတော့2သိန်းထက်လည်းပိုမပေးနိုင်ဘူး…အေးဆေးမှ နောက်ဆယ်လေးငါးရက်လောက်ကြာ လူရှင်းတော့မှ သွားဝယ်မယ် ဆိုသူတွေအတွက်ပါ)
အဲ့ဒိဒုက္ခတွေကို မခံချင်ပဲ2သိန်းအတိနဲ့ ချက်ခြင်းလည်းဝယ်လို့ရမဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကို ညွှန်ချင်တာပါ။ အဲဒိနေရကတော့ဗျာ…လှိုင်တက္ကသိုလ် RC-2 ထဲမှာရှိတဲ့ MICT Park ဘေးနားကကပ်ရပ်ဗျာ..ရတနာပုံတယ်လီပေါပ် မှာ လာဝယ်လိုက်ဗျာ။ သိတဲ့သူသိပ်မရှိသေးတော့ လုံးဝ တန်းစီစရာလိုဘူးရယ်။ အလွန်ဆုံးတန်းစီရမှ…4 ယောက်လောက်ပေါ့ဗျာ။4ယောက်လောက်တန်းစီမှ မိနစ် 20 တောင်ကြာပေါင်ဗျာ။ ပြီးတော့ နေရိပ်ထဲမှာ….ရောင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေကလည်း တစ်ခြားနေရာတွေနဲ့များကွာပါ့။ ဆက်ဆံရေးဆိုချောလို့ မွှတ်လို့လေ။2သိန်းထက်လည်း 1 ကျပ်တောင်ပိုပေးရဘူးရယ်။
ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်က သံလမ်း မှက်တိုင်မှာဆင်း။ ကပ်စေးနဲပြီး လမ်းလျှောက်ရင် 15 မိနစ်လောက်ကြာမယ်၊ ဆိုက္ကားစီးရင်တော့ 300 ဗျား…ရတနာပုံတယ်လီပေါ့ ကိုသွားမယ်သာပြောလိုက်၊3မိနစ်လောက်ပဲကြာသဗျာ၊ ကဲ…မဒါဆို2သိန်းမတန်တဲ့ဖုန်းကို2သိန်းအတိနဲ့ နာရီဝက်အတွင်းရပြီဗျာ….
(အော်မေ့လို့…ရောင်းတဲ့ကောင်တာက ကောင်မလေးတွေက ကျန်တာသဘောကောင်းပေမဲ့ သူတို့ဆီက ဘောပင်တော့မငှားနဲ့နော်…အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ သူတို့ကဟောက်ထုတ်မှာဗျ…ဘာကြောင့်သတုန်း ဆိုတော့ ဒင်းကလေးတို့ကလည်း ဒါလေးတစ်ချောင်းနဲ့ …ဘောပင်ပြောပါတယ်…ရေးလိုက် မှက်လိုက်လုပ်နေရသကိုးဗျ။)
(အာ…..ထပ်မေ့ပြန်ပြီ။ ရုံးပိတ်ရက်တော့မရဘူးနော်…ရုံးဖွင့်ရက်မှာတောင် မနက်9နာရီကနေ နေ့လည်2နာရီထိပဲနော်။ )
ကဲ…….အားလုံးမပင်မပန်းပဲနဲ့ (တစ်ပြားမှပိုမပေးရပဲနဲ့) ရကြပါစေဗျားးး……..(နာရီဝက်အတွင်း ရမယ်လို့အာမခံတယ်နော်…မရရင် ဒေးဗစ်ပါးကို ဖိနပ်အီးအီးသုတ်ပြီးသာရိုက်လိုက်ကြပါဗျာ…အဲ…..ရခဲ့ရင်တော့ ဒေးဗစ်ပါးကို အာဝါးပေးရမယ်နော်…..ဟိ…..ဟိ……)
အာဗျာ……..ရွာထဲမှာ လိမ်စရာလားဗျ….လိမ်ပါဘူး….ကျွန်တော်ရုံးက အဲ့ဒါနဲ့ကပ်ရပ်ဗျ….MICT Park ထဲမှာ ကျွန်တော်လုပ်တာဗျ…..ညာဘူး…….ခုဝယ်ခုရဗျာ….WCDMA ဆိုရင် 1မိနစ်အတွင်းရတယ်ဗျာ….GSM ဆိုရင်တော့ 15 မိနစ်လေက်ပဲစောင့်ရမယ်…..
အိုကေ …ဆက်ပီး မျှဝေလိုက်မယ်နော် ..
အွန့်… သိရတာနောက်ကျတွားဘီ… ချောချောချီးချီးတော့ လက်မတို့ဘူး…
ဒါနဲ့ စကားအတင်းစပ် MICT Park ထဲက
နံပါတ်တော့ ရွေးမရဘူးရယ်……သူတို့က Company ကတိုက်ရိုက်ရောင်းတာဆိုတော့လေ……ငွေပိုပေးရလားဆိုတော့…1 ကျပ်တောင်ပိုပေးရပါဘူးဗျာ…ရွှေနှင်းဆီပုံပြင်ကတော့ခုထိရှိတုန်းပါဗျာ….အရင်ကအတိုင်းပါပဲ…ဈေးများသွားတာလေးပဲကွာသပါ့….
အနော်က အဲ MICT ဝင်းဂျီးထဲက ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ အလုပ်လုုပ်တာ …
ဂယ်လို့ အဖော်လိုရင် … သွားဝယ် … အဲ .. ဟုတ်ပါဘူး .. ပြော …
ကိုDavitက ရတနာပုံတယ်လီပို ့ကပေါ့နော်။ဟီး နောက်တာပါဗျ။
အာဝါး ပေးစေချင်ရင်တော့ …
သများတို့ကို နှစ်သိန်းချေးလိုက် …
ဒါနဲ့ စကားမစပ်တစပ် ..
အဲမှာဝယ်ရင် နှစ်သိန်း တစ်ခါတည်း ချေရတာလား …
တိန်…….. ဒီမှာ လကုန်ခါနီး ဘိုင်နေပါတယ်ဆိုမှ….2 သိန်းချေးပါတဲ့….
Company ကတိုက်ရိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2သိန်းအပြည့်ချေပြီး ချက်ချင်းဖုန်းကဒ်ဝယ်၊ ချက်ချင်းဆက်လို့ရသဗျား…..(အဲ့မှာ ပိုက်ဆံကဒ်ပါတစ်ခါတည်းရောင်းသလေ…)
အူးလေးသတင်းအတွက် တင့်ခရုပါဗျို ့..
အကြွေးရရင် ဂဒ်လောက် ဝယ်ပေးဘာ အူးလေး
အော်ကိုရင်ဒေးဗစ်တစ်တစ်ရယ် စောစောကပြောပေါ့အေ… သများတို. ရုံးဖယ်ရီက အဲဒီရှေ.ကဖြတ်တာ စာရေးမလေးတွေက ဘောငှားတာ မကြိုက်ဘူးတဲ့ အဲအဲ ဘောပင်ဘောပင်ပြောပါတယ် ပင်ကျန်ခဲ့တော့ ခိခိ…
ဖုန်းလျှောက်တာ ချက်ချင်းကလဲ ရ ချာယေးမငေး တွေဂလဲ တဘောတောင်းချိုတော့ သွား ဖုန်းငမ်းလျှောက် လိုက်အုံးမယ် ကျေးကျေး
ဘောတော့ ဆောင်တွားဗျို့…….ဘောပါမှ အဆင်လေးရယ်ပြေတာ…အဲ့မှာက အဲ့ဒါအရမ်းရှားတာဗျ…ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိဝူးးးးးး…………..ဟာ…..တူ့ရိုဘဲ…….. ပင် ….. ကျန်ခဲ့ပြန်ပြီ………….ဟီး………..
Thank you Ko Davit. I’ll pass the information who really need telephone sim card.
လိုနေတဲ့သူတွေကို ညွှန်ပေးလိုက်ပါဗျာ…..ဘယ့်နှယ့်….ဖုန်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်အကြီးကြီးတွေက ဒီနေ့အထိဘယ်လိုလုပ်သတုန်းဆိုတော့ သူ့ဆိုင်က ဟန်းဆက်ဝယ်မှ2သိန်းအတိနဲ့ ရမှာတဲ့ဗျာ။ နို့မို့ဆိုကတော့ 5000 နဲ့ 10000 ကြားပိုပေးနေရတုန်းဗျို့။ ပေါ်တင်ကိုတောင်းတာဗျာ။ ဝယ်ချင်သူတွေကလည်း2သိန်းအတိနဲ့ရမဲ့ဆိုင်ကိုသိတာဆိုလို့ Elite ရုံးခွဲနဲ့ ရတနာပုံ ရုံးခွဲတွေလောက်ပဲသိတာ။ ဒီ ရတနာပုံရုံးခွဲကျတော့ လမ်းမတန်း(လမ်းမကြီးတွေရဲ့ဘေး) မဟုတ်တော့ သိတဲ့သူသိပ်မရှိဘူးရယ်။ ဒါကြောင့်လာဝယ်တဲ့သူကလည်း တော်တော်လေးကိုကျဲတယ်လေ။ ညကကျွန်တော် ဖုန်းရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ သူတို့ရောင်းနေတာ2သိန်းတစ်သောင်းတဲ့။ 1 သောင်းလည်းအပိုယူသေး မျက်နှာကြည့်တော့လည်း 8 ခေါက်ထပ် 1 ခေါက်လောက်ပိုချိုးထားတဲ့ပုံမျိုးဗျ။ အဲ့ဒိအချိန်မှာ ဝယ်မဲ့သူကိုပြောပြချင်လိုက်တာ ပါးစပ်ကိုယားလို့ တမာဆေးလူးထားရတယ်။ ဆိုင်ရှင်ထရိုက်မှာစိုးလို့သာငြိမ်နေရတာ။ ဒါကြောင့်ရွာသားအပေါင်းတို့ရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုသိစေချင်လို့ မောင်းတီးရတာပါဗျို့…….
မြို့လည်ခေါင်က ဒိုကိုမို ဆိုင်မှာ သူရို့ဆီက ဟန်းဆက် မဝယ်ရင် နှစ်သိန်းနှစ်သောင်း… ဟန်းဆက်ပါ ဝယ်ရင် နှစ်သိန်းတစ်သောင်းတဲ့… ဂယ်ဘဲ.. မတိလို့ပေါ့…
ဒီသတင်းပေးလို့ ကျေးဇူးတင်မဆုံးပါဘူး ကိုဒေးဗစ် ရေ။ တခြားသူတွေ ကိုလဲမျှဝေလိုက်ပါဦးမယ်။ အဲဒီမှာ ဖုန်း အလုံးရည် ဘယ်လောက်ရောင်းမလဲမသိဘူးနော်။ ဒါလေးတော့သိချင်သားဗျာ။ ဘယ်နှစ်ရက်ထိဆက်ရောင်းမှာလဲ ပိုက်ဆံစုပြီး ဝယ်ချင်တဲ့ မီးမီးတို့ အတွက် ပြောပေး။ မေးပေး။ ခိခိ
နေ့တိုင်းရောင်းပေးနေပါတယ်ဗျာ…..အလုံးရေဘယ်လောက်ဆိုတာတော့ Monday ကျမှမေးပြီးတင်ပေးပါမယ်။ ဒီနေ့ကတော့2နာရီကျော်သွားပြီဆိုတော့ သူတို့ရုံးပိတ်သွားလို့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်…။ အလုံ ( Elite အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ..ဝိုက်တော နှင့် ဆင်မင်းဈေး မှတ်တိုင် ကြား) မှာလည်းဝယ်လို့ရတယ်..။ ပိုမပေးရပါ…။
အန်ကယ်လေးရေ … Elite ဆိုလို့ကတော့ .. တော်ပါပြီ လက်လံတယ် …. ။ တခြားElite ဆိုင်တွေထဲ မျက်စိလည်ပြီး ရောက်ချင်ရောက်မယ် .. ဘုရင့်နောင်ဆိုင်ခွဲကိုတော့ .. ဒီတစ်သက် ခြေဦးမလှည့်ဘူး … ။ ကာစတန်မာဆိုတာ ဘာမှန်း မသိလို့ … ။
Elite တခြားဆိုင်ခွဲတွေမှာ ၂သိန်းတန်ထွက်တုန်းက ချက်ချင်းမရောင်းပါဘူး … ဟိုလှည့်ဒီလှည့် လုပ်ပါသေးတယ် … ကိုယ်တိုင် ခံလာရတဲ့ …ရွာထဲက ဂျာနယ်လစ် ၊ အယ်ဒီတာ စုံတွဲတစ်တွဲပြောတာ … ။
ကိုဒေးဗစ်ရေ .. လောလောဆယ်ဝယ်ဖို့တော့ အစီစဉ်မရှိပေမယ့် .. ဗဟုသုတအနေနဲ့ မှတ်သားထားပါတယ် … ။
ဒီလ၂၄ ရက်နေ့က အသိတစ်ယောက် GSM နဲ့ WCDMA တစ်လုံးစီ ဝယ်တာ နေ့ချင်းရလာတယ်…အစဉ်ပြေတယ်ဆိုလို့ပါ..။
ဝယ်မလို့တော့ဟုတ်ပါဘူး ဘယ်သူမှ မမေးသေးလို့ မေးပေးတာ..
ကျုပ်က ငါးထောင်တန် စောင့်ဦးမှာ..
(ကိုရွာစားကျော်—အရစ်ကျနဲ့တော့ အဲ့ဒိမှာ မရောင်းဘူးဗျ) (Ma etone ရေ….ကျွန်တော်ခုညွှန်တဲ့ ရတနာပုံတယ်လီပေါ့တ် ကတော့ ဆက်ဆံရေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ…အပိုလည်း မပြောသလို အလိုလည်းမပြောပါဘူး…ဖေါင်ဖြည့်ဖို့ယူတာတောင်မှပဲ ဖေါင်ကြေးဘယ်လောက်ပေးရမလဲလို့ မသိလို့မေးကြည့်တာကို “ဖေါင်ကြေးမပေးရပါဘူးရှင်” လို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲဖြေတယ်ဗျ။ မဆိုးဘူးဆိုရမလားဘဲ။ ပြည်လည်း လှည်းတန်းမီးပွိုင့်နားက ရတနာပုံ မှာကျတော့ ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့နေရသလားအောင်းမေ့ရတယ်။ ရတနာပုံ ချင်းအတူတူတောင်ဗျာ။)
5000 တန်တော့သိဘူးရယ်……1သိန်းတန်လောက်တွေ 2012/2013 ဘဏ်ဏာရေး(မပေါင်းတတ်လို့ဗျို့) နှစ်မှာ ရောင်းပေးမယ်လို့ကြားနေရပြီဗျ။ 2012/2013 ဘဏ်ဏာရေးနှစ်ဆိုတာ ပြက္ခဒိန်နှစ်မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီနှစ်ထဲမှာလို့ ယူဆလို့တော့ရတယ်ဗျို့…..ဖုန်းနဲ့ပက်သက်ပြီးထွက်တဲ့ ကောလဟာလဆိုတာမျိုးကလည်း တစ်ကယ်ချည်းကိုဖြစ်ဖြစ်လာတတ်တော့(သာဒကတွေရှိခဲ့တယ်လေ…နော့်) စောင့်တာမမှားဘူးဗျို့……
အခုအချိန် ပြည်တွင်းမှာသုံးတဲ့ (မိုဘိုင်း)လိုင်းထဲမှာ ဘယ်လိုင်းကအကောင်းဆုံးအမိဆုံးလဲဗျာ သိရင်ပြောကြပါ
ကျုပ်လဲဒီနေ့ ဖုံး တစ်လုံးထပ်ဝယ်စရာရှိလို့ မြို့ထဲက နာမည်ကြီးဆိုင်တွေမေးတာ ၂သိန်းဖုံးကို တစ်သောင်းခွဲက နှစ်သောင်းခွဲအထိ ၊ WCDMA ကို နှစ်သောင်းက သုံးသောင်းခွဲအထိ ပိုယူကြတယ်။ အဲဒါတောင် ဖုံးဝယ်ရင် ဟန်းဆက်ပါဝယ်မှရောင်းမှာလို့ပြောကြတယ်။
ကမာရွတ်လှည်းတန်း၊ အင်းစိန်လမ်းမပေါ်၊ အိုင်တီကဖေး နဲနဲကျော်မှာရှိတဲ့
TOUCH ဖုံးဆိုင်မှာသွားဝယ်တာ တစ်ပြားမှအပိုမပေးရ၊ သိပ်မစောင့်ရပဲ လွယ်ကူစွာ ဝယ်လို့ရခဲ့တယ်။ ဟန်းဆက်လဲ အဲဒီမှာဝယ်ဘို့မလိုပါ။ စနေတနင်္ဂနွေ မပိတ်ပါ။
အမှန်တော့ အဲဒီဆိုင်က ကောင်မလေးတွေ ဆက်ဆံရေးသိပ်မကောင်းလို့ မသွားပဲနေတာ။ အခုသွားတော့ဆက်ဆံရေး မဆိုးပြန်ပါဘူး။
အဲဒီဆိုင်ကို ကြော်ငြာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေ လူလည်ကျမခံရအောင် ညွှန်တာပါ။
လိုအပ်လို ့/ လိုချင်လို ့ဝယ်မယ့်သူတွေ အတွက် ရှယ်နယူးပေါ့ဗျာ ။ ဒါနဲ ့ရန်ကုန် ၂သိန်းဖုန်း က နံပါတ်ဘယ်လောက် နဲ ့စတာတုန်းဗျ ။
ကျုပ်က ၄၅၀ဝ နဲ့စတဲ့ WCDMAဖုန်းကိုပဲဝယ်ခဲ့တာဆိုတော့ ရန်ကုန်၂သိန်းဖုံး ဘယ်လောက်နဲ့စမှန်း မသိသေးဘူး…။
ဝယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးကိုဖတ်ပီးမှ ဝယ်သင့်တယ်ထင်တယ်ဗျို့
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ရက်နေ့မှာ စတင် ချထားပေးခဲ့တဲ့ ကျပ်သိန်းနှစ်သိန်းတန် GSM ဖုန်းများဟာ ဝယ်ယူပြီး မကြာမီမှာပဲ ပျက်စီးမှုများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ဝယ်လိုအားများနေတဲ့ ကျပ်(၂)သိန်းဖုန်းတွေဟာ ပြင်ပဆိုင်တွေမှာ ကျပ်နှစ်သိန်းခွဲအထိ ဈေးပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျပ်(၂)သိန်း ဖုန်းကဒ်အချို့ဟာ ဝယ်ယူပြီး မကြာမီပါပဲ ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီး သက်ဆိုင်ရာကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာမှာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
၂၀၁၂ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၁)ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ၄၂၁ဝနဲ့စတဲ့ ဖုန်းဆင်းကဒ်တကဒ်ကို ကျပ်နှစ်သိန်းခွဲ ပေးပြီး ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ညနေပိုင်းလောက်ကျတော့ ဖုန်းက လုံးဝ ဆက်လို့မရဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် your sim card is reject ဆိုတဲ့စာတန်းပဲ ပေါ်ပေါ်လာပါတယ် ဟု ကျပ်နှစ်သိန်းတန်ဖုန်း ဝယ်ယူပြီးနောက် ကဒ်ပျက်စီးမှု ကြုံတွေ့ခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောကြားပါတယ်။
ထို့အပြင် ၎င်းကပင် ဆက်လက်ပြီး ဒါနဲ့ရွှေဂုံတိုင်မှာရှိတဲ့ ဂျီအက်စ်အမ်ရုံးချုပ်ကို သွားပြီး တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ ဖုန်းကဒ် အရောင်းအဝယ် ကိစ္စတွေသာ ဆောင်ရွက်နေလို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော ့ဗဟန်းဆက်သွယ်ရေးရုံးကို သွားဖို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ပါတယ်။ ဗဟန်းရုံးကို ရောက်တော့လည်း လောလောဆယ်တော့ ကဒ်ကိုသာ ကိုင်ထားပါဦးလို့ပြောပြီး တစ်စုံတရာ ဆောင်ရွက်ပေးတာ မရှိပါဘူး။ ကျနော့လိုပဲ ဆင်းကဒ်ပျက်လို့ လာတဲ့သူတွေ ရွှေဂုံတိုင်ရုံးမှာရော ၊ ဗဟန်းရုံးမှာပါ အများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ် လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တန်ဖိုးနည်းဖုန်းအဖြစ် ဈေးကွက်မှာ ဝယ်လိုအားများနေတဲ့ ကျပ်နှစ်သိန်းဖုန်းတွေဟာ မူလတန်ဖိုးထက် ပိုမိုစွာပေးဝယ်နေရတဲ့အပြင် ဝယ်ယူပြီး နောက်မကြာခင်မှာ ကဒ်ပျက်စီးမှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေအတွက် နစ်နာမှုတွေဖြစ်ရကြောင်းလည်း သုံးသပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဘားမားဗီဂျေ…..
ရန်ကုန်2သိန်းဖုန်းက 420 ရယ် 421 နဲ့စတယ်လို့သိရပြီး…..WCDMA (2သိန်းခွဲဖုန်း ရန်ကုန်ဖုန်းကတော့) 44 / 45 နဲ့စတယ်လို့ သိရပါတယ်ဗျား
ဒီလိုသတင်းလေးတွေက လိုနေသူတွေ အတွက် အများကြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်ဗျာ
ဒါပေမယ့်ပိုက်ပို်က်မရှိဘူး ချေးကျပါအုံးနောက်တာပါ ခုလိုသတင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်